एमाले टोन - परिहास - नेपाल
एमालेको लिंगमा प्रशस्त सन्देह छ । त्यो सन्देह स्वयं एमालेका लागि भने सामान्य भइसक्यो । भाले र पोथीको मात्र होइन, एमालेको ‘टोन’समेत सन्देहास्पद छ । पहिलो चरणको चुनावमा उसले कमल थापाको गाईतिर सम्बन्ध बढायो । एमाले सजिलै कमाले भयो । त्यो कतिपयलाई अवैध लाग्छ । एमालेलाई के वैध, के अवैध ? दोस्रो चरणका लागि उसले राजपाको छातातिर सल्किने लक्षण देखाइरहेको छ । किनभने, एमालेका मुखिया केपी ओली टोन बदल्न सिपालु छन् । अति शुद्धतावादी पोखरेली कांग्रेसीहरुको टोन त लाल सलाम–जय नेपाल, जय नेपाल–लाल सलाम, जय–लाल, लाल–जय भइसक्यो भने ओलीको टोन लाल सलाम–जय मधेस, जय मधेस–लाल सलाम, लाल–मधेस, मधेस–लाल आदि इत्यादि हुनै नसक्ने कुरा होइन । आखिर एमालेको टोन के हो त केपी कमरेड ? घाम–छाता, छाता–घाम !